Oromiyaa keessatti barnoonni sad.1ffaa Afaan Oromoo qofaan akka kennamu murtaaye - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Oromiyaa keessatti barnoonni sad.1ffaa Afaan Oromoo qofaan akka kennamu murtaaye
Manniin barnoota dhunfaa Oromiyaa keessa jiran hundi barnoota sadarkaa 1ffaa Afaan Oromoo fi imaammata barnoota Oromiyaa qofaan akka laatan murtaaye. Murtiin kuni kan darbe qajeelfama ministerri barnoota itoophiyaa tibbana laateen. Murtiin kunis Fulbaana 2017 (2010) irraa eegalee hujii irra kan ooluu ta’uun isaa beekameera.
Kana dura, yeroo dheeraadhaaf, manniin barnoota dhuunfaa Afaan Oromoo fi imaammata barnoota Oromiyaa dalgatti jechuudhaan barnoota sadarkaa 1ffaa kan laataa turan imaammata Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee hordofuudhaan. Haalli kuni, manniin barnoota barumsa Afaan Amaaraan laatan baay’ataa fi Afaan Oromoo quucaraa akka deemu godheera. Manniin barnoota dhuunfaa imaammata barnoota Oromiyaa hordofuu dhiisuun isaanii guddina Afaan Oromoo irratti dhiibaa uumaa bira darbee, gara ilaalcha gadhee barnoonni qulqullina qabu kan laatamu Afaan Oromoo fi imammata Oormomiyaan osoo hin taane imaammata magalaa Fininneen jedhutti geessuu eegalee ture. Haalli kuni saboonni Oromiyaa keessa jiran ijoollee isaanii Afaan Oromoo barsiisuu mitii Oromoon tokko tokko ijoollee isaa gara Afaan Amaaraatti akka dhiibuuf balbala banee ture. Amma tankaarfii sirreessuu fudhachuun isaanii nama jajjabeessa.
Ijoolleen kamuu barachuu kan qabdu afaan afaan ittiin hiikkattaniin ta’uun isaa ifa. Kana dura dhugaa kana dalgatti jechuudhaan aadaan gara Afaan Amaaraattii fiiguutu heddumaataa tureera.
Previous articleItti-gaafatamaan dhimma pirotokoolii muummicha ministera Itoophiyaa sirnicha ganuudhaan Ameerikatti koolugaltummaa gaafatan
Next articleAbbaanduulaa Gammadaa Taayitaa Afyaa’ii Paarlaamaa Itoophiyaa gadidhiise